Waa kuma Muuse Geelle, guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashada dalka? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Waa kuma Muuse Geelle, guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashada dalka?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) ee Soomaaliya oo maanta qabtay doorasho ayaa waxaa lagu doortay guddoomiye cusub.
Sawirro: Sidee Madaxweynaha Jabuuti loogu soo dhaweeyey Muqdisho?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana garoonka Aadan Cadde kusoo dhaweeyey,...
Nemanja Matic oo beeca Xorta ugu biiraya Kooxda Juventus
Heshiisyada ilaa hada ka dhacay Suuqa kala iibsiga ee Maalinta Deadline...